23 UJobe waphendula wathi: 2 “Ngisho nanamuhla isimo sami sokukhathazeka+ siwukudlubulunda;Isandla sami siyasinda ngenxa yokububula kwami. 3 O ukube bengazi ngempela ukuthi ngingamtholaphi!+Bengiyoze ngifike endaweni yakhe emisiwe.+ 4 Bengiyokwethula phambi kwakhe icala lobulungisa,Futhi umlomo wami bengiyowugcwalisa ngamazwi okuphikisa; 5 Bengiyowazi amazwi angiphendula ngawo,Futhi bengiyokucabangela lokho akushoyo kimi.+ 6 Ingabe ngokuchichima kwamandla ubeyolwisana nami?Lutho! Ngokuqinisekile yena ngokwakhe ubeyongilalela.+ 7 Ngokuqinisekile oqotho uyoqondisa izindaba naye lapho,Futhi bengiyosuka kumahluleli wami ngiphephile kuze kube phakade. 8 Bheka! Ngiya empumalanga, akekho lapho;Ngiphinde ngibuyele emuva, angimboni;+ 9 Ngiya kwesobunxele lapho esebenza khona, kodwa angimboni;Uphendukela kwesokunene, kodwa angimboni. 10 Ngoba uyazi kahle indlela engiyithathayo.+Ngemva kokuba esengivivinyile, ngiyophuma nginjengegolide uqobo.+ 11 Izinyawo zami zibambé izinyathelo zakhe;Ngiyigcinile indlela yakhe, futhi angiphambuki.+ 12 Angigudluki emyalweni wezindebe zakhe.+Amazwi omlomo wakhe ngiwalondé+ ngaphezu kwalokho engikuyaleziwe. 13 Unomqondo munye, ubani ongamelana naye?+Umphefumulo wakhe unesifiso, futhi uyosenza.+ 14 Ngoba uyokufeza ngokuphelele engikuyaleziwe,+Futhi izinto ezinjengalezi ziningi kuye. 15 Yingakho ngizizwa ngiphazamisekile ngenxa yakhe;Ngizibonisa ngingonakayo futhi nginengebhe ngaye.+ 16 Ngisho noNkulunkulu ngokwakhe wenzé inhliziyo yami yaba novalo,+Futhi uMninimandla onke ngokwakhe ungiphazamisile.+ 17 Ngoba angithuliswanga ngubumnyama,Noma ukuthi isigayegaye simboze ubuso bami.